The Holy Rosary Divine Office Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Wamkelekile kweli candelo ukuze ufunde okungakumbi malunga irosari. Kweli nqaku siza kuthetha nge Ingcwele yeRosari KwiOfisi kaThixoSiza kuchaza nendlela yokwenza kunye nembali yayo, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo, ungaqhubeka nokufunda oko sikuphathele kona.
Ufanele uyithandaze njani iRosari yesikhundla sikaThixo?
1 IOfisi kaThixo eNgcwele yeRosari: Iyintoni, intsingiselo kunye nemvelaphi
1.1 Iiyure zomthandazo weOfisi kaThixo yeRosari
1.2 IRosari eNgcwele yeOfisi kaThixo
IOfisi kaThixo eNgcwele yeRosari: Iyintoni, intsingiselo kunye nemvelaphi
IOfisi eNgcwele iqondwa njengemithandazo esesikweni ehlelwe yiCawa yamaKatolika, yeOthodoki neAnglican, ngenjongo yokuba kuthiwe ngalo naliphi na ixesha losuku okanye ngamaxesha amisiweyo. Ii-Ofisi zikaThixo ziyaziwa ngokuba yiLiturgy yeYure, omabini amagama achanekile. Lowo wenza imithandazo uyeka yonke imisebenzi yakhe ukuze azalisekise isikhundla esingcwele.
Igama elithi iOfisi kaThixo livela kwisiLatini "officium divinium", elithetha "uxanduva lobuthixo." Etymologically, kunokuthiwa kuvela kwibinzana elithi "umsebenzi ofezekisiweyo kuThixo." Kuba ezi ofisi kufuneka zenziwe ngaphakathi kweeyure ezahlukeneyo imini yonke, ke ngoko, loo maxesha apho sizalisekisa ukuba iiofisi zingcwalisiwe.
Kwelinye icala, imvelaphi yayo ivela kwinkulungwane yesine, apho kwathandazwa kwafundwa iziqendu ezininzi zeBhayibhile. Emva koku, imithandazo eyayisenziwa yaqokelelwa kwincwadi eyaziwa ngokuba yiBrevario, eyathi kamva yathatyathelw 'indawo lelinye igama, le yayiyiNcwadi yeeYure, okanye ikwabizwa ngokuba yiHorarirum.
Iiyure zomthandazo weOfisi kaThixo yeRosari
Iiyure apho kuthiwe i-ofisi yobuthixo yaziwa ngokuba "ziiyure ezingcwele." AmaYuda athembela kumkhwa wokuthandaza ngamaxesha amisiweyo. Konke oku kwaqala ngaphambi kokufika kukaKristu. Ke ngoko, ukusukela ngala mzuzu ukuya phambili, iiyure zokuthandaza imini yonke zaqala ukusekwa.
Ngakolunye uhlangothi, iMatins okanye iindumiso zasekuseni ziyimini yokuqala yosuku, oko kuthetha ukuba, ngumthandazo wakusasa. Ngaphambili, aba babethandazelwa kwakusasa, kodwa oku kwakuthetha ukuba kwakusemva kobusuku. Emva koko sinoLudumo, eli gama lithetha "ukudumisa"; Phakathi kweminye yemithandazo eyenzeka ngexesha lokudumisa, sinayo: iculo, iindumiso ezimbini, iingoma ezivela kwiTestamente eNdala okanye eNtsha, uBawo Wethu kunye nokufundwa okufutshane kweBhayibhile.
Ke, sineVesper, evela kwiLatin "vesper", ethetha "ngokuhlwa", ke oku kuza kuba yiofisi yasemva kwemini. Le ikwanayo nengoma, iindumiso ezimbini, ingoma evela kwiTestamente eNdala okanye eNtsha, ikunye noTata wethu, ufundisiso olufutshane lweBhayibhile, kwaye, ekugqibeleni, iMagnificat yeNtombi Enyulu. Iiyure ezincinci zibandakanyiwe, zezi:
Inkulumbuso: iyure yokuqala emva kokushiya ilanga, Ngo-6: 00 kusasa malunga.
Tercia: 8:00 am iyure yesithathu emva kokuphuma kwelanga,
Okwesithandathu: kukujikeleze i-11: 00 am
UNona: 2:00 pm malunga, nelixa lesithoba.
Ngokunjalo, kumarhamente bekungasoloko kubaluleke kakhulu ukuba zonke ezi zinto zitshiwo njengoko kubonisiwe, kwimeko yokufuna ukuba yinxalenye yemithandazo kulo mthandazo, iofisi inokuncitshiswa ekuthandazeni iiLauds ngaphambi kokuya emsebenzini nasemva koko. ukuphela komsebenzi wabo.
IRosari eNgcwele yeOfisi kaThixo
Ngophawu loMnqamlezo Ongcwele… Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen.
INkosi yam uYesu Kristu, uThixo noMntu oyinyani, undisindisela yonke into
Intliziyo yokona, kuba ndifanele isihogo kwaye ndilahlekile
Izulu, nangaphezulu kwako konke, ngenxa yokuba ndikucaphukisile, wena ulunge ngokungapheliyo,
endimthandayo ngaphezu kwezinto zonke.
Ndicebisa ngokuqinisekileyo, ngobabalo lwakho, ukuba ndizilungise kwaye ndimke
Amathuba esono, ukuvuma izono, nokuzisola. Ndiyathemba
uya kuxolela inceba yakho engenasiphelo. Amen.
Nkosi vula imilebe yam
Umlomo wam uya kukudumisa.
Uzuko kuYise, uNyana noMoya oyiNgcwele
Njengoko ibinjalo ekuqalekeni, ngoku nangonaphakade, ngenxa kaNdikhoyo
iinkulungwane zeenkulungwane. Amen.
Ekupheleni kweemfihlakalo uBawo Wethu uyathandazwa kwaye alandelwe ngulo mthandazo kufuneka siqhubeke sithandaza kathathu, lo mthandazo ulandelayo:
Yibani, Mariya Oyingcwelengcwele, Ntombi kaThixo uYise,
Intombi enyulu inyulu ngaphambi kokubeleka, ezandleni zakho ndiyinikezela
ukholo lwam ukuze ukhanyise, uzele lubabalo, iNkosi inawe ...
Yibingelele wena, uMariya oyiNgcwele, iTempile kunye neTabernakele yoBathathu Emnye oyiNgcwele, iNtombikazi ikhulelwe ingenasiphako isono sokuqala:
UThixo akusindise, u-Queen kunye noMama wenceba,
Ubomi, ubumnandi kunye nethemba lethu,
Sikubiza ngokuba ngoonyana bakaEva abathinjiweyo,
Siyakubongoza, uyalila kwaye uyalila,
Kule ntlambo yeinyembezi
Yiza ke, igqwetha lethu,
buyisela amehlo akho enceba kuthi,
nasemva kokuthinjwa asibonise uYesu,
Unobabalo, oh unenceba,
oh Intombi enyulu kaMariya!
Kwicawa yama Katolike emveni kokugqiba thandaza irosari engcweleNgokwendalo iitani zeNtombi Enyulu ziyacengcelezwa; Olu luhlobo lwesicelo esenziwa kuThixo ngayo yonke inkolo yethu, nalapho uYesu Krestu, iNtombi Enyulu nabo bonke abangcwele babekwa njengabalamli.
Nkosi yiba nenceba kuthi.
UKristu unenceba kuthi.
Bawo waseZulwini, onguThixo.- Yiba nenceba kuthi.
UNyana woMhlawuleli wehlabathi, onguThixo.-Yiba nenceba kuthi.
UMoya oyiNgcwele, unguThixo. -Senzele inceba.
UZiqu zintathu ezingcwele ukuba wena unguThixo omnye.-Yiba nenceba kuthi.
Ungalibali ukufumanisa malunga nazo zonke iirosari, kwiwebhusayithi yethu, uya kufumana imithandazo eyahlukeneyo ukuze ukwazi ukuyifunda kwaye uyisebenzise nanini na xa ufuna, Umthandazo oya kwi-Helena. Ngokukwanjalo, siyakumema ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo ukukunceda ufunde ngakumbi ngeRosari eNgcwele yeOfisi kaThixo.